Shabaab oo baahiyey in weeraradii ugu badnaa ay ka fuliyeen xaruumaha dowladda iyo kuwa ciidanka – Radio Daljir
Shabaab oo baahiyey in weeraradii ugu badnaa ay ka fuliyeen xaruumaha dowladda iyo kuwa ciidanka
Agoosto 6, 2013 3:31 b 0
Muqdisho, Aug 6, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa sheegay in ay xoojiyeen weerarada ka dhanka ah xaruumaha ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku leeyihiin gobollada Koonfureed ee dalka, weeraradaasi waxaa ku jira qaraxyo waa weyn.
Afhayeenka u hadlay kooxda Al-shabaab oo la yiraahdo sheikh Cabdi-casiis Abu Muscab wuxuu sheegay in ay 21 weerar oo qaraxyo ah ka fuliyeen magaalada Muqdisho dhowrkii habeen ina dhaafay, wuxuu xusay in weeraradaasi ay dhamaantood la beegteen xaruumo ay dowladdu leedahay.
Al-shabaab waxay kaloo sheegeen in ay gantaalo ku gaaraceen garoonka kubbada cagta ee Muqdisho Stadium halkaasi oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM, balse ururku ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Sheikh Muscab wuxuu sheegay in dhamaan weeraradaasi ay xaqiijiyeen in ay khasaare ku gaarsiyeen cadowga sida uu hadalka u dhigay, balse ilaa hadda ma uusan xusin tiro rasmi ah oo dhaawacyo iyo dhimasho oo ay gaarsiiyeen AMISOM.
Ururka Al-shabaab waxay kaloo ku sheegeen war-saxaafadeedka ay soo saareen in weeraro ku qaadeen ciidamada AMISOM ee ku sugan Baydhabo, iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee jooga Jannaale, kuwaasi oo khasaare ku gaarsiiyeen dhinacyadaasi.
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waa weyn oo lala beegsaday xaruumo kala gedisan, in kastoo aan la sheegin khasaare dhimasho oo qaraxyadaasi ka dhashay, waxaase dhowr qarax oo ka dhacay Xamar habeen ay geysteen dhaawaca 10 ruux.